I-VETV kunye ne-Plura Joining Forces yokunceda amaVeteran angasebenziyo-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, uMsasazo osasazisi we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Okufumaneka » I-VETV kunye ne-Plura Joining Forces ukunceda amaVeteran angasebenzi
I-VETV kunye ne-Plura Joining Forces ukunceda amaVeteran angasebenzi
Ingaphakathi 'yeDenali Gold' i-SuperShooter yeThala leThala leTranskni linikezelwa kwiiTeteran-TV ngo-NEP.
URobert Lefcovich uyindoda enomsebenzi. Ufuna ukunceda abanqwelwana abangasebenziyo bafumane umsebenzi kumashishini amathelevishini ngokubonelela ngokuqeqeshwa koqeqesho olukhululekile. Ngombulelo omkhulu kwiRain Kalo kunye nenkampani yakhe i-Plura, kubonakala ngathi iphupha likaLefcovich liza kuba yinyani.
Kwiminyaka yakhe engaphezu kwe-50 kwimboniselo yethelevishini kunye nefilimu, i-Lefcovich igqoke iinqhathi ezininzi, kubandakanywa izicatshulwa njengekhamera (I-World Wide Yezemidlalo ye-ABC, I-Julie Andrews Bonisa, Masenze Ukwenza), umhleli (Konke kwiNtsapho, iJeffersons, Ngenye imini kwixesha, iHolomark Hall Hall, iGosa), Kunye iziphumo ezizodwa umhleli (uSidney Lumet amandla, Woody Allen I-Pink Rose yaseKairo). Kwi-2019, i-Lefcovich isungulwe Iimvumi-iTV eGrass Valley, CA. (Akunakudideka nge-VET Tv, inethiwekhi yomdlalo we-comedy-themed network).
Ingxelo yomsebenzi we-Veterans-TV (okanye i-VETV) ingafumaneka kwiwebhusayithi yayo kwiphepha elithi "Inkqubo yoQeqesho": "Inkqubo yethu inikezela ubuchwephesha, ixesha-langempela, izandla kwi-TV nokuveliswa kobugcisa boPhulo. I-VETV isebenza ngamaqhawe aseMerika aseMelika kunye neeNkonzo ezingabonakaliyo kunye namalungu entsapho. Injongo ye-VETV kukukunceda ukuzalisa ulwahlulo lwabaqeqeshi bezemisebenzi kwabo babuya kwiinkonzo, kwaye ekugqibeleni ukuphucula ubomi beMantloko kunye neentsapho zabo ... I-VETV ayikho inhlangano ekhuthazayo yezopolitiko. Sinikeza inkqubo yethu yoqeqesho ngaphandle kweendleko kubathathi-nxaxheba. Bonke abaMantshi, kunye nabatshati kunye nabaxhomekeke kwiiVeteran kunye namalungu enkonzo esebenzayo ngaphezu kweminyaka eyi-18 bayamkeleka ukufaka isicelo. I-VETV ayicacaluli ngokusekelwe kubuhlanga, ngokwesini, ngesini, ubuhlanga, inkolo, ukuxhatshazwa ngokwesondo, okanye indawo yokuhlala. "
"Ndayifumana ingcamango yeVETV emva kokuphucula abaTshali abaneTadio Studios e-Oakland," u-Lefcovich wandixelela. "Ndidibana ne-vet" ententeni "phantsi kweendlela. Wayebambelele kwiimeko ze-'Catch 22 '... wayengenayo imali, ayikwazi ukufumana indawo yokuhlala, akanakufumana umsebenzi onenjongo, akanakukwazi ukufumana iimpahla zodliwano-ndlebe, njl njll. Ngaba wayekwazi ukulawula i-PTSD, kodwa abantu abazange baqonde iimfuno zakhe . Wathi oko wayekufuna ukuba umntu amphathe njengomntu kwaye amvumele ixesha elifanelekileyo ukulungelelanisa. "(Ibali elipheleleyo linokuvakala Apha.)
Injongo yam yayikukuhlanganisa i-15-20-foot truck eneekhamera ezimbalwa kwaye uye kule 'nkampu zeentente' kwaye unikeze uqeqesho kumaqhawe, "u-Lefcovich waqhubeka. "Ndithumela ii-imeyile kumadoda kwi-shishini, kwaye ngokukhawuleza yaqhuma ebusweni bam. Wonke umntu wayefuna ukuba yingxenye yale projekthi. Iqela le-NEP lokuqala lanikele le ngqungquthela enkulu yeDenali Gold. Emva koko iinkampani zendawo ezifana neGrass Valley, Belden, Ividiyo ye-AJA, Iimpawu zokudibanisa, Telestream, kunye neeRenegade Labs zanikela ngesixhobo sethu sokugqibela kunye nesona sikhulu njengeminikelo. Kwi-NAB, ndandwendwela malunga neenkampani ze-20, kwaye zonke izakhi zivunyelwene ukunikela ngegesi. I-Blackmagic yanikela ngeendleko ezininzi, kuquka ne-19-intshi rackmount. Ngelo xesha ndandiqonda ukuba ndandiyekanga indawo ebalulekileyo yeloli, i-Monitor Monitor Wall. Ndaqhagamshelana neenkampani ezine ezenza uhlohlo kunye nomgangatho ofunekayo kwiloli. URay Kalo ePrara wayengowokuqala ukuphendula 'sitshele nje into oyifunayo.' "
U-Kalo uthatha ibali ukusuka apha. "Ndidibana noBob Lefcovichr kwi-Veterans-TV kwi-NAB 2019. Sixoxe ngeli thuba ngendlela iPrara kunye neVETV ngokungaxhamla ngayo kunye nokusebenzisa i-Plura Monitoring Solutions-ngokukodwa i-Plura i-monitor-neprojekthi entsha. U-Plura wagqiba ekubeni anikezele ii-Veterans-TV ezininzi ukuba zijonge ukuxhasa le projekthi ekhethekileyo. "
"Isisombululo sokuBekwa kweliso kwiPlura Yakha uluhlu olubanzi lwentsebenzo yomgangatho ophezulu yokusebenza kwi-86-intshi, kubandakanya i-4K-intshi, utshilo uKalo. Ngokulinganayo, izisombululo zexesha / zeSyncronization zenzelwe usasazo lwedijithali kunye nemveliso yevidiyo eyiyo. Iimveliso zePlura zibonelela ngeseti engenakuthelekiswa nanto, umgangatho ophezulu wemifanekiso, kunye nexabiso elingaqhelekanga kunye nokuthembeka. I-Plura yaziwa ngexabiso eliphantsi ngokwenene, elinezinto eziphezulu zokugcina ezakhelwe phezu kwetekhnoloji ephambili. Izisombululo zale nkampani zibandakanya ukubonwa kwe-studio kunye neevidiyo eziphethekayo, ixesha lokuveliswa kwe studio, ukuboniswa kweekhowudi zexesha kunye amakhadi e-PCIe, izixhobo zovavanyo nomgangatho kunye nesoftware, kunye neenkqubo zosasazo zedijithali. "
"Sacela izicwangciso ze-55-intshi ezintandathu, apho bavuma ngokukhawuleza," u-Lefcovich waqhubeka. "Ngomnye, ngolunye usuku, enye inkampani yavuma ukuthumelela i-55-intshi esithandathu. Kwakhona sifuna izilindwe ezisibhozo malunga ne-17-intshi ezinikezelwe ababonisi beekhamera. Sacela uRay ukuba sitshintshe isicelo sethu kubagadi abancinci, kwaye wavuma ngaphandle kokungabaza. "
I-Kalo ichaze ngokuchanekileyo ukuba yiyiphi imveliso iPrara eyinikele kwi-Veterans-TV. "I-Plura inikezele nge-8 x 19-intshi ye-LCM-119-3G ababonisi bokusabalalisa kwindonga yokubeka iliso kuMmandla woPhuhliso. Ezi zihlolwe ziya kutyiswa ngababukeli abaninzi. Umboniso wokubeka iliso unokutshintsha ngexesha elide kwaye ngoko ke unike umfanekiso ofanayo. Ukubuyiselwa kwembuyiselo kubuyisela umboniso wakho kumgangatho wesalathisi wokukhanya kunye nokungafani kombala. Iimpawu eziqhelekileyo zamagqabi zinokuphelelwa ngamandla kwaye zingabikho ukulinganiswa, nokuba iimbonakalo ezininzi ze-gamut zingabi zichanekile. Ngoko ke onke ama-Plura anikezela ngamehlo ahlanganiswe kunye nePrara ICAC [I-Intelligent Connection yokulungelelanisa kunye nokulinganisa] ithuluzi kunye nencomo yombala ecetyiswayo. Zonke iindwendwe zanikezwa ngxelo yengxelo.
Ndabuza uLevcovich ukuba andixelele ngoba ngubani oya kubaqhuba ii-Veterans-TVs. "Abaqeqeshi bethu kwaye baya kuba ngamavolontiya asebenzayo okanye ahlala phantsi kwiindawo zabo. Baquka uBob Ennis, umlawuli we Isondo Fortune; UPeter Mason, i-CTO kunye ne-EIC yamaVeterans-iTV; kunye no-Jim Boston, i-EIC yamatori amaninzi kunye nombhali wencwadi ecacileyo kumabonwakude TV kwiMagesi. UKevin Windrem noGlen Stillwell baya kufundisa i-audio. UJohn Field, uBob Ennis, noMike Minkoff baya kufundisa malunga nobugcisa bomlawuli wezobuchwepheshe. Ndiza kuba qeqesho kubahleli beClips kunye ne-Adobe Premiere, kwaye uJoe Lewis uya kufundisa yethu Avid neeklasi zeProTools. Abaninzi baye banikela iinkonzo zabo kodwa balinde ixesha lethu kwiklasi ukuze bazinike ixesha labo.
"Asisayi kuqalisa iiklasi, njengoko asiyi kuba namandla kwiloli kuze kube kamva kule nyanga. Inkampani yethu yamandla iPG & E ifake isicelo sokukhusela i-bankruptcy, kwaye sisaphakamisa i-$ 18,000 efunekayo yoxhumo olutsha. Sibona i-VETV isuka kwiklasi ye-10 yabafundi, kwiiklasi ezintathu kunyekanye nabafundi be-8-10 nganye. Sifuna ngobuchule i-RV / Toy Hauler apho kwakhiwe khona i-unit ye-kamera ye-4-camera ukuze abafundi basebenzise 'njengobomi bokwenene' baqeqeshe ukwenza imisebenzi eNyakatho yeKalifornia baze bahlawulelwe. Ukuba sinokufumana i-CEO yokucinga phambili kwi-org, sinokubona ezinye iilori ngolunye usuku eSan Diego, e-Jacksonville FL naseNew York. "
Ndaphendululwazi ndlebe ndabuza uKalo ukuba wayecinga ukuba uPrara asebenze kunye nabadlali be-Veterans-TV kwikamva. Wathi, "Hayi," watsho. "Thina ePrara siyawazisa inkonzo yethu yeevenkile, kunye nokuzibhokoxa nokuzidela kwabo bakwenzele ilizwe lethu. I-Plura iyaxabisa ngokungenamthetho inkonzo yabo eyenziwa kulo lonke ihlabathi, kwaye ukuba yinxalenye yale program ayikho nto ngaphandle komqondiso wokuhlonipha. "
U-Doug Krentzlin ungumdlali, umbhali, kunye nefilimu kunye nomlando-mlando we-TV ohlala eSiliver Spring, MD kunye neekati zakhe uPherher no-Miss Kitty.
I-2019 NAB bonisa iprofayili yaseNew York: UKelley Slagle - Septemba 19, 2019
I-2019 NAB bonisa iprofayili yaseNew York: Amy DeLouise - Septemba 16, 2019
I-2019 NAB bonisa iprofayili yaseNew York: UJem Schofield - Septemba 5, 2019
Ividiyo yeAHA Belden Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli UDenali Gold SuperShooter I-Mobile yeTranski Iimpawu zokudibanisa Grass Valley NAB 2019 Iqela leNEP Abanqobile abaneThedi Stuosos Isisombululo sokuBekwa kweliso kwiPlura Ray Kalo IiRabhanji zeRenegade URobert Lefcovich Telestream BuTeknoloji I-Ultra HD Forum Iimvumi-iTV VETV Injini yeVidiyo	2019-07-03
Previous: I-deluxe yaseBrooklyn i-Senior Senior Colorist uBill Ferda iyakusiza ukutyhila ihlabathi ngaphaya kweGiliyadi "kwiTale's Handmaid".
next: Ukukhula kweemfuno ze-Aperi zobugcisa bokuvelisa i-media media kukunceda ikhuphe i $ 10m + ngemali
Umyili wemveliso / Umyili wemveliso
Ilungu leqela lesitrato